Ubudlelwane | Isiseko soMvuzo, uthando, isondo kunye ne-Intanethi
Ubuhlobo obunempumelelo buxhomekeke ekwakheni ukuqonda uthando kunye nendlela uthando lunokusebenzisana ngayo ngesondo.
Uphi na uhlaziyo oluphambene nomxube? Kutheni le nto ingozi enkulu?
"Yintoni uthando?" lelinye lawona magama akhangelwe kwiinjini zokukhangela. ” Ukuqukunjelwa kwesifundo seGrant, uphando olwenziweyo lweminyaka engama-75 kwiYunivesithi yaseHarvard, yayikukuba "ulonwabo luthando". Isifundo seGrant sabonisa ukuba ubudlelwane obufudumeleyo sisiseko esifanelekileyo sempilo, ubutyebi kunye nobomi obude. Ngokwahlukileyo, umlutha, uxinzelelo kunye ne-neurosis zezona ngxaki ziphambili kule meko inqwenelekayo. Ukuqonda imingcipheko ejikeleze ukusetyenziswa kwe-intanethi kubalulekile ukuba sifuna ukunqanda ukutyibilika kwaye sifumane ulwalamano lothando olwanelisayo endaweni yoko.
• Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi